सुजिता प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका रामेश्वर भन्छन् ह’ त्या नै भएको हो ! - dautarimedia.com
सुजिता प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका रामेश्वर भन्छन् ह’ त्या नै भएको हो !
sanjay July 6, 2021 1 min read
vedio linl inside. काठमाडौं । राप्ती नगरपालिका वडा नं. ३ की सुजिता भण्डारीको शव फेला परेको छ । राप्ती ३ को धमिलीमा रहेको बम्हस्थानि सामुुदायिक वनमा भण्डारीको शव फेला परेको हो । उनका परिवारका सदस्यले शवको पहिचान गरेपछि सुजिताको श व भन्ने प्रमाण भएको हो ।
वनको विचमा एउटा झ्याङमा अड्किएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । स्थानिय जनप्रतिनिधि , प्रहरी र स्थानियको टोलिले शव पुरा सडेको अवस्थामा भेटेका थिए । अहिले श व पो ष्ट मा र्टमका लागी प्रहरीले भरतपुर पठाएको छ । उनको अ प हरण पछि ह त्या ग रि एको आ श कां गरिएको छ ।
शवलाई पो ष्टमार्ट मका लागि भरतपुर अस्पताल लगिँदै गरेको र यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको बताईएको छ । वडाकै सिमराचोकमा रहेकी साथीको घरमा जान्छु भनेर बिहान ६ बजे घरबाट निस्किएकी सुजिता अपरान्ह १२ बजेसम्म पनि घरमा नआएपछि परिवार ह’रा’ए’को टुङ्गोमा पुगेका थिए ।
दिदी कविताले करिब सवा १२ बजेको समयमा सुजिताले आफूलाई फोन गरेर कारमा आएको १ पुरुष २ महिलाले आफूलाई अ पह रण ग रेको र बचाउन आग्रह गरेको बताएकी थिईन् । सुजिताको फोन आएपछि परिवारजनले सुजिता अ’प’रणमा परेको भन्दै खो’जी गरिदिन इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
दिदी कविताको मोबाइलमा सुजिताले पटक पटक गरेर तीन पटकसम्म फोन गरेकी थिईन् । सुजिता कसैको नि यन्त्र मा रहेको प्रहरीले यसअगाडी नै आश कां गरेको थियो । सुजिता बुुद्धशान्ति क्याम्पस गड्यौलीमा स्नातक तहमा अध्ययनरत थिईन् ।
Previous: सुजिता प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका रामेश्वर भन्छन् ह’ त्या नै भएको हो !
Next: दाइजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकि ग’र्भ:वती म’हिलाको ह,त्या